Rehefa Tsy Te-Hihaino An’i Netanyahu Ianao Dia Manoratra Rindrambaiko Informatika Hisolo Tena Anao Hanao Izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2015 16:30 GMT
Taorian'ny nanaovany fandalinana mifototra amin'ny isan'ireo tenifototra tao anatin'ireo kabary telo nataon'i Netanyahu ho an'ny Kaongresy Amerikana, hitan'i Tarek Amr fa nihena be ny fitenenany ny “fandriampahalemana”, raha toa kosa nanaka-danitra ny filazàny ny “nokleary”. Sary nafangaron'ny mpanoratra.
Tao amin'ny Medium no namoahan'i Tarek Amr ity lahatsoratra ity voalohany tamin'ny 8 Martsa 2015.
Ny 3 Martsa, nikabary teo anoloan'ny Kaongresy Amerikana ny Praiminisitra Israeliana Benjamin Netanyahu. Io no kabary fanintelo nataony tao; ny voalohany dia tamin'ny 1996, ary ny faharoa tamin'ny 2011. Tamin'ity indray mitoraka ity ilay mpitarika Israeliana dia nahazo fanasàna avy amin'i John Boehner, mpitondra teny avy aminìny Repoblikana ao amin'ny Antenimiera, mba hiresaka ny fandaharanasa nokleary ao Iran sy ny fifanarahana nifanaovan'i Irana sy Etazonia.
Tsy dia fahita firy izany izaho manam-paharetana mihaino kabarin'ny politisiana izany, ary tsy afa-miala amin'izany i Netanyahu. Kanefa, nisafidy aho ny hanoratra rindrambaiko kely mba hamintina ilay kabary ho ahy.
Raha ny tena izy, rehefa misy olona miteny, dia ireo teny fampiasa matetika toy ny “ny”, “dia”, “ho an'ny”, “mba”, “sy”,sns… no tena mivoaka amin'ny kabarintsika. Ireny teny ireny no mivoaka betsaka noho ny teny hafa rehetra, ary zara raha misy dikany amin'ny firafitry ny teny, sady koa efa mahazatra ny manaisotra azy. Saingy tamin'ity fotoana ity, lasan'i Netanyahu ny zava-bita vaovao tamin'ny fampiasàna matetika ny teny hoe “Iran” miohatra amin'ny fampiasàna ireo teny fampiasa matetika, afa-tsy ny “ny“. Amin'ny fiteny fampiasa amin'ny fikajiana anaty solosaina dia “stop-word”, na “teny mari-piatoana”, no ilazantsika ireny teny ireny.
Ary izao, mba hahatakarana ny zavatra nifantohan'ilay kabary, nataoko lisitra ireo teny mitàna ny laharana 10 voalohany nampiasaina tao anatiny, tsy ao anatin'izany ireo teny mari-piatoana.
Rehefa jerena ny vokatra, dia mazava ankehitriny fa momba “ny fifanarahana nokleary ao Iran” ilay kabary, eo ny praiminisitr'i “Israely” ary ny nanaovana azy tao “Amerika”. Manana ny anjarany ao anatin'ireo teny mitàna ny laharana 10 voalohany ny hoe “Iran”.
Inona no fomba fijerin'ny praiministra Israeliana ilay fifanarahana, izay mbola manan-kery, hatramin'i Iran sy ny fitondrana Iraniana? Ndeha hojerena hoe ny teny inona no nipoitra nanakaiky ny teny inona.
Dia izao! “ratsy” ilay “fifanarahana”, hitondra ho any aminà “baomba” io, ilaina ny “manolo” azy aminà “safidy iray” “tsara kokoa”. “Radikaly” i “Iran”, tsy maintsy “hisisika” amin'ilay “fandaharanasa” izy, ary angamba hifandray amin'ilay vondrona “ISIS” mahery fihetsika. “Mijoro” miaraka akaiky amin'i “Amerika” i “Israely” ary “mahafantatra” zavatra. Dia “hisaorana” i “Amerika”, ary hiara-dia ny “Silamo” sy ny “milisy”.
Nanao ahoana ny kabary tamin'ity taona ity raha mitaha amin'ireo roa nataony tany aloha teo anatrehan'ny Kaongresy Amerikana tamin'izany fotoana izany?
Nifantina teny sasantsasany aho hampitahàna ny fivoahany tao anatin'ireo kabary telo.
“Iran” sy ny fandaharanasa “nokleary ” no malaza izao, raha toa kosa ny “fandriampahalemana” sy ny “demaokrasia” ka any amin'ny mangitsokitsoka. Eo hatrany i “Amerika“, ary saiky marobe toy ny manerana ny tany ny rantsa-mangaikany. Voateny ny “Ejipta” tamin'ny 2011, taonan'ilay nantsoina hoe lohataona Arabo. Kanefa, takon'ny “Palestiniana” io avy eo. Tsy nisy tia velively ny “Ady“, fa nitomba ho lehibe hatrany isan-taona ny “nokleary“.
Fanamarihan'ny mpanoratra: Heverinao fa mahaliana/miavaka ve ity lahatsoratra ity? Aza misalasala mamerina mamoaka azy. Avoaka eo mabanin'ny lisansa Creative Commons (CC-BY) izy ity. Heverinao ve ho tsy alehany ve na mitanila ny fomba fandàliko? Na tsapanao ve fa misy ilàna fanampiana fandalinana hafa? Nalefako ny “code” tamin'ilay rindrambaiko nampiasaina teto. Aza misalasala mandika azy, mijery ny ao anatiny ary mizara azy, aza adino ny milaza ny nakànao azy.